Intlanganiso yelungu lesi-3 ye-Zhejiang Plumbing Valve Association Association yabanjwa ngempumelelo
ngomphathi ku 21-05-10
Umbutho we-Zhejiang imibhobho yeshishini lokufaka imibhobho yamanzi, eyasekwa ngo-Matshi 2003, yamkelwa yiKhomishini yezoQoqosho nezoRhwebo yePhondo kwaye yabhaliswa liSebe leMicimbi yasekuHlaleni. Oonobhala bakwi-Yuhuan County, kwiPhondo laseZhejiang. Lo mbutho awunanzuzo, uqoqosho kunye c ...
Ingxaki yokuhambisa ngoMeyi 2021
Kwiintsuku zamva nje, iindaba zokulibaziseka kwempahla ebangelwe kukuxinana kumazibuko aseMntla Melika kunye namaxesha amade okulinda iinqanawa zesikhongozelo beziqhubeka ngokungapheliyo. Abathumeli banethemba lokunciphisa ifuthe kwimalike yamalungiselelo njengoko behlengahlengisa ukungabikho kwamandla okuhlangabezana nazo zonke iimfuno. Kwi...
Uphuhliso lweMveliso yeValve yeBrass
ngomphathi ku 21-04-19
Njengemveliso ebalulekileyo exhasa imveliso, iivalve zobhedu kunye nezinto zobhedu zisetyenziswa kakhulu kumandla ombane, ipetroli, isinyithi, ukhuselo lokusingqongileyo, amalahle kunye nezinye iinkalo zoqoqosho lwesizwe kunye nokugcinwa kwamanzi, ulwakhiwo lweedolophu nolunye ulwakhiwo lwezixhobo. T ...
Kwi-2026, isikali sentengiso yevalve yolawulo iya kufikelela kwi-US $ 12.19 yezigidigidi
Ivalve yolawulo ilawula ukuhamba kolwelo, njengegesi, umphunga, amanzi okanye ikhompawundi, ukuze umahluko oveliswa yinkqubo yolawulo usondele kangangoko kwixabiso leseti elifunayo. Ivalve yolawulo lelona candelo libaluleke kakhulu kuyo nayiphi na inkqubo yokulawula inkqubo, kuba ibaluleke kakhulu ...
Icandelo lonyango lweValve yamanzi
ngomphathi ku 21-04-06
Kwiminyaka yakutshanje, oorhulumente abaphakathi kunye nabasekhaya baqhubekile nokuqinisa imigaqo-nkqubo yolawulo lokusingqongileyo, kwaye ifuthe le-COVID-19 lenze abathengi ngokuya befuna impilo kunye nokhuselo lokusingqongileyo. Kule meko, ishishini lokunyanga amanzi lisandula ukubonakalisa ...
Ukukhawulezisa inguqu kwimizi-mveliso kunye nokuphucula ishishini levalve
Njengenxalenye yolawulo lwenkqubo yokuhamba kolwelo, ivalve inemisebenzi emininzi, njengokunqunyulwa, ukumiselwa, ukuphambukiswa, ukuthintela ukuphindaphinda, ukuphambukisa, ukukhulula uxinzelelo, njl. Nophuhliso oluqhubekayo lobugcisa vana, isicelo fie ...
UWandekai wamisela umgca wokuvelisa omtsha weNkqubo ye-HVAC
ngomphathi ku 21-03-22
Ukubuyiselwa kwezoqoqosho kwihlabathi liphela sisiganeko esinokubakho kakhulu Ngokunyuka nokwanda kokusetyenziswa kweyeza lokugonya le-COVID-19, ukuqhambuka kulindeleke ukuba kuqulethwe ngokufanelekileyo kwisiqingatha sokuqala sika-2021, ngaphandle kotshintsho olwenziweyo, kwaye ukubuyiselwa koqoqosho lwehlabathi kuya kukhawulezisa. . Uqoqosho lwehlabathi i ...
I-Yuhuan: tyhala phambili uhlengahlengiso lokudityaniswa kwecandelo leValve
Isixeko saseYuhuan sesona sixhobo sikhulu sokwenza imveliso kunye nokuthumela kwelinye ilizwe kumazantsi aphantsi kunye nasezantsi koxinzelelo lwezivalo zethusi eTshayina, ezaziwa ngokuba yi "China valve capital". Kukho ngaphezulu kwe-1300 yemibhobho yamanzi kunye nokuveliswa kwamashishini amashishini esixekweni, enexabiso lonyaka lokuphuma ...
Ukusukela oko kwaqala i-2021, ixabiso lebhar ye-bronze ibangele inkxalabo kwezentlalo
ngomphathi ku 21-03-06
Ukusukela oko kwaqala i-2021, ixabiso lebhar ye-bronze ibangele inkxalabo kwezentlalo. Emva koSuku loNyaka oMtsha, ixabiso lebhar yebar liye lenyuka, ngaphezulu kwe-17%. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba emva koMnyhadala weNtwasahlobo ngo-2021, ixabiso lobhedu liyaqhubeka nokunyuka kwaye ixabiso libetha enye irekhodi eliphezulu ...
Ukujongana nefuthe le-COVID-19
Ukuchaphazeleka yi-COVID-19 ngo-2020. Iindleko zokuhambisa iimpahla phakathi kwe China ne Yurophu ziye zanyuka ngokutshixeka kwesibetho okuxhokonxa i-intanethi yokuthenga, kunye nokunqongophala kwezikhongozeli zezothutho ezingenanto kunye nabasebenzi bamazibuko abakhoyo kuphazamisa urhwebo lwehlabathi. Ukuhambisa amaxabiso ekhonteyina kuye kwabuya ...
Nceda abalingani ukuphuhlisa iimarike
NgoFebruwari 26,2018, usekela-Mongameli u-Lihong Chen utyelele amaqabane e-Bromic Group.Efforts kufuneka yenziwe ukwanelisa iimfuno zamaqabane, ukunceda iqabane ukuba liphuhlise imveliso. Imveliso ephambili ibandakanya: Ikota yokuTshintsha kweValve yokuNikezela; IiValve zokuNikezela ngeeNdawo ezininzi; F1960 kunye neF1 ...
Umsitho wokutyikitya isivumelwano sobambiswano sehlabathi
NgoJanuwari 30,2018, umsitho wokutyikitywa kwentsebenziswano yeqhinga phakathi kweWandeKai kunye neWATTS yabanjwa. IWatts yinkokeli yehlabathi yezisombululo zamanzi ezisemgangathweni kwiindawo zokuhlala, kwimizi-mveliso, koomasipala nakwezentengiso. I-WandeKai yakhe ubudlelwane obomeleleyo bokusebenzisana neWatts ze ...